El caballero de Olmedo, Lope de Vega inotanga tragicomedy | Zvazvino Zvinyorwa
Knight weOlmedo ndiwo mutambo unoratidzira pamberi uye shure mukati mechiitiko cheCastilian. Yakanyorwa naLope de Vega pakati pa1620 na1625, inoonekwa seyakavandika tragicomedy. Kana kanenge kekutanga chidimbu icho zvinhu zvese zviri zviviri zvakasanganiswa "zvakanyatsonaka" nemunyori.
Saizvozvowo, iwo mavara anonyatso kusimbisa iyo archetype yevakajairwa mavara mukati mezvikamu zveSpanish Goridhe Age. Kusvika padanho, maficha eva protagonists nevapikisi venhoroondo vanoramba vachishanda-nekumwe kusiana- kusvika nhasi.
1.1 Hupenyu huzere nemakaka
2 El caballero de Olmedo, basa diki?
3 Tsanangudzo ye tragicomedy
4 Basa rinotarisirwa?
4.1 Iwo archetypes
4.2 Vatambi vechipiri
5 Kufungisisa basa?
Kunze kwekuve ari mudetembi ane mukurumbira, iyeBasa rinoshamisa raLope de Vega Carpio rakamupa nzvimbo yaro munhoroondo yezvinyorwa. Akazvarwa muMadrid munaNovember 25, 1562, iro chete guta maakafira makore 72 gare gare, musi waAugust 27, 1653. Pamwe chete naTirso de Molina, ndiye aive nebasa rekupa simba chairo kumutambo wekukomberedzwa. vogue panguva yeIberian baroque.
Iye haana kuenda asina kucherechedzwa pakati peavo venguva yake, pane kudaro, aigara achiziva nzira yekucherechedzwa mune zvenguva yake. Zvichakadaro, akaumba hushamwari hwakakura naFrancisco de Quevedo naJuan Luis de Alarcón. Kunyangwe aive nemakwikwi makuru ne Miguel de CervantesRuremekedzo rwakachengetedzwa pakati pavo. Nekudaro, aive asinganzwisisike achipokana naLuis de Góngora.
Hupenyu hwake chaihwo hunoratidzika senge inoshamisa script: nyaya dzakawanda dzerudo, akatongerwa kugara muhutapwa kwenguva, murume akafirwa Kuuya kwaLope de Vega kwakakodzera vazhinji vehunhu hwake. Mushure mehupenyu huzere nekukwira nekudzika uye zvakawanda "zvakapenga zvinhu", akazopedzisira asarudza kuzvigadza semupristi.
Nekudaro, kuzvipira kwake kuna Mwari hakuna kumutadzisa kuenderera nehunhu hwake "hunopokana". Semuenzaniso: kudanana naMarta de Nevares, mukadzi ane makore makumi maviri nemashanu akange akaroora kubvira aine 25. Ehe, iyo "yepamutemo nyaya" inochengetera iyo "kukudzwa" kwekutorwa semudetembi wekupedzisira mudiwa.
Knight weOlmedo, Basa diki?
Unogona kutenga bhuku pano: Knight weOlmedo
Lope de Vega haana kupa kukosha kwakanyanya kune ichi chisikwa chake. Haana kusvika kuzoona iyo yekudhinda vhezheni (yekutanga edition yaisazobuda kunze mushure mekufa kwake). Uyezve, iro rekutanga zvinyorwa rakarasika kwenguva, pasina munyori wemitambo akanetseka nezvazvo.
Vatsoropodzi venguva yake havana kumuona seakakodzera kucherechedzwa. Saizvozvo, Kusvikira kumagumo ezana ramakore rechiXNUMX raingova rimwe basa mukati mekabhuku akawandisa emunyori weMadrid. Yakanga isiri iyo kusvika kuma1900 kuti iyi pfungwa yakachinja. Basa racho rakataurwa kusvika padanho rekukwira kuenda kuchikamu chakakosha mukati meyakasarudzika nhoroondo yehunyanzvi.
Tsanangudzo ye tragicomedy
Sezvatotaurwa pamusoro pemitsetse yepamusoro, kusvikira kusvika kwa Knight weOlmedo iyo pfungwa yeatraomicomic theatre yaisavapo. Mitambo, - iyo, kazhinji, yaive njodzi- kana ma comedies aiitwa. Nekudaro, kuseka nhamo yaive pfungwa isina kunyorwa ivo vanyori kana veruzhinji.
Ehe saizvozvo, Lope de Vega akakwanisa kusanganisa zvese zvinhu zvinobudirira. Kunyangwe kazhinji, panguva yekuvandudzwa kwechirongwa, yega yega inopfuura zvakasiyana, isina kunyatsogadzira musanganiswa. Kunyangwe paine chokwadi chekuti veruzhinji vanogona kukanda kubva pakutanga magumo asina kunaka kwazvo kune protagonist.
Pamwe ichi ndicho chikonzero nei vese Baroque kushoropodzwa - iripo pfungwa kusvika kumagumo eRoma - uye munyori iye pachake akafunga Knight weOlmedo sechidimbu chidiki. Kubva pamitsetse yekutanga, zviri pachena kuti iro chete gumo remunhu mukuru kufa.
Pamusoro pezvo, kukosha kwakapihwa kumagumo kunoshamisa mukati merondedzero yeSpanish Goridhe Age haigone kunzvengwa. Zvakare, chikamu ichi chaionekwa senge chiri mukati mehunyanzvi hwekuita Uye, kunze kwemamonji ebasa iri (kugara uchivaraidza), hapana munhu anonyanya kushamiswa nesarudzo yekupedzisira.
Knight yeOlmedo inotenderera mavara matatu akanyatsotsanangurwa:
Iyo protagonist ndiDon Alonso, anokudzwa knight, akashinga uye anokudzwa; muenzaniso wehunhu hwese hunotarisirwa kumurume munyoro.
Doña Inés, inosanganisira iyo yekufarira. Mukadzi akadzikama, akavimbika uye anoremekedza vane masimba (anomiririrwa nababa vake, Don Rodrigo).
Don Rodrigo, ndiye anopikisa nyaya, asina kutendeka uye anonyengera.
Vatatu vevanyori vanoperekedzwa nevamwe vatambi, avo vanopindurawo kune akavharwa archetypes. Pakati pavo: Tello, muranda waDon Alonso, ndiye bhaisikopo wenhoroondo. Naizvozvo, hurukuro dzako nezviito zvine chekuita nekuseka kubva kune vateereri.
Pedyo neharlequin inomira Fabia, iyo pimp iyo inofambisa rudo. Kunyangwe mimwe mitsara yake ichiseka, mamiriro ake sen'anga anopedzisira amushandura kuita rima uye diabhudhi.
Padivi remupikisi, Mendo, muranda waDon Rodrigo, ndiko kufananidzwa kwezvinoreva kushanda pamwe chete nemunhu akaipaku. Kusvika padanho rakadai, kuti ndiye ane basa nekukonzeresa kufa kwemunhu mukuru.
Kunze kwema archetypes akatsanangurwa pamusoro, imwe yezvinhu zvitsva zve Knight weOlmedo iko kusavapo kwemisiyano pakati pevatambi. Mune mamwe mazwi, mune iri basa naLope de Vega iyo yakakosha pateni haina kuteverwa panguva ino yenhoroondo. Iko "vanokudzwa nevanhuwo zvavo" vakamiririrwa nenzira yakasiyaniswa zvakajeka.
Chii chinonyanya kusarudza ibasa rinoitwa nemumwe uye mumwe mukati mekuvandudzika kwechirongwa. Misiyano isinganzwisisike iri munzira dzekutaura. Nebasa rakanyorwa rose muzvikamu zvisere-zvirafu uye nhetembo yakanamatira, vaviri vanotungamira vanogara vachishandisa zvimiro zvekunyepedzera senge madimikira uye anaphora.
Tello naFabia, vamiririri ve "makirasi epasi", vanotaura nenzira yakapfava uye yakapusa. Iyi nzira yekuzviratidza inowedzera kuwedzera basa ravo se "mabhudhi" mukati menyaya. Nenzira iyi, Lope de Vega airatidza kukosha kushoma kwaanobatirira kumutauro wakanatswa mukati Knight weOlmedo.
Kunyangwe panguva yegumi nemanomwe, Unyanzvi hweIberia hwaisungirwa kuzadzikisa imwe tsika yekuita basa. Naizvozvo, Lope de Vega, kupfuura hupenyu hwake hwakazara nemakaka uye kupokana, aigona kutiza chikumbiro ichi. Knight weOlmedo hazvisi izvo, kunyangwe paine mamwe mapoinzi
Zvakanaka, njodzi inotora hupenyu hwe protagonist (pasina kunyatsokodzera), ani naani anoita zvakaipa anopedzisira arangwa. Saizvozvowo, avo vanoshandira mashiripiti kuyedza kuzadzisa zvinangwa zvavo vanobhadhara mutengo wakanyanya wakashinga wekushinga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Theater » Knight weOlmedo
Imwe yemasaga emumvura. Hornblower, Bolitho uye Lewrie